ရိုထရီ မဟာဘွဲ့ ပညာသင်ဆု လျှောက်ကြမယ်
၂၀၂၀-၂၀၂၁ အတွက် ရိုထရီ ပညာသင်ဆု (Rotary Peace Fellowship) လျှောက်လွှာများ ခေါ်ယူနေပြီဖြစ်ကြောင်း ဆိုရှယ်မီဒီယာများတွင် တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒီကမ္ဘာကျော် ရိုထရီပညာသင်ဆုများကို အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု (United States of America)၊ ရိုထရီအင်တာနေရှင်နယ် (Rotary International) ၏ ရိုထရီဖောင်ဒေးရှင်း (Rotary Foundation) မှ ပေးအပ်တာဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်ကို မဟာဘွဲ့ (Master’s Degree Program) အပြည့်အဝ ပညာသင်ဆု ၅၀ ခန့်အထိ ပေးအပ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်လွှား သတ်မှတ်အရည်အချင်း ပြည့်မီသူ မည်သူမဆို လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒီမဟာဘွဲ့ ပညာသင်ဆုရရှိသူများဟာ ရိုထရီမှ သတ်မှတ်ထားသော ကမ္ဘာတလွှားတက္ကသိုလ် ၆ ခုတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပဋိပက္ခဖြေရှင်းမှုဆိုင်ရာ ဆက်စပ်ဘာသာရပ်များဖြစ်တဲ့ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးရေး၊ စီးပွားရေး၊ မီဒီယာ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး စတဲ့ ဘာသာရပ်များကို လေ့လာသင်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာရေးသူဟာ အဆိုပါ ရိုထရီ မဟာဘွဲ့ပညာသင်ဆု (၂၀၀၉-၂၀၁၁) လက်ခံရရှိခဲ့ ဖူးသူဖြစ်လေရာ ရိုထရီဟု မြင်ရုံ၊ ကြားသိရုံနှင့် အတွေးစိတ်ကူးများဟာ လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ခန့်က မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှိစဉ် ရိုထရီပညာသင်ဆုရရှိရန် လျောက်ထားဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ကျောင်းတက်စဉ် အချိန်ကာလများ၊ ပညာသင်ကြားပြီး ပြန်တော်ပြန်အချိန်ကာလများဆီသို့ စိတ်လည် ရောက်ရှိသွားတတ်ပါတယ်။ ယခင်ကလည်း ရိုထရီ အမှတ်တရဆောင်းပါးများ၊ နေထိုင်ရာမြို့၊ ကျောင်းများအကြောင်း ဆောင်းပါများ ရေးသားခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခုလည်း မတူကွဲပြားတဲ့ ဆောင်းပါး နောက်တစ်ပုဒ် ရေးခြစ်နိုင်ဖို့ စာရေးသူ ရိုထရီပညာသင်ဆုရရှိပြီးနောက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ မြောက်ကယ်ရို လိုင်းနားပြည်နယ် (North Carolina)၊ ဒူရမ်မြို့ (Durham)၊ Duke University တွင် နှစ်နှစ်ကြာ ကျောင်းတက်ရောက်ခဲ့စဉ် ၉ ရက်၊ ဩဂုတ်လ၊ ၂၀၀၉ မှ ၁၈ ရက်၊ မေလ၊ ၂၀၁၁ နှင့် အမေရိကန်မှ မြန်မာသို့ အပြန်၊ မလေးရှားသို့ ခေတ္တဝင်ရောက်လည်ပတ်၊ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိသည့် ၂၆ ရက်၊ မေလ၊ ၂၀၁၁ အထိ နေ့စဉ်မပျက် ရေးသားခဲ့သော ဒိုင်ယာရီစာအုပ်ကို ပြန်လည်ဖတ်ရှုရင်း စိတ်အစဉ်က အတိတ်အရင် ၁၀ နှစ်ကာလဆီသို့ လွှင့်မျောရောက်ရှိသွားပါတော့တယ်။
ဒိုင်ယာရီစာအုပ်တောင် အသုံးမပြုတာ အတော်ကြာမို့ ဖုန်တက်နေပြီ။ ဒိုင်ယာရီမှာ ဘာတွေ ရေးထားခဲ့ပါလိမ့်။ ၉ ရက် ဩဂုတ်လ ၂၀၀၉ မှာ မြန်မာနိုင်ငံကနေ အမေရိကန်နိုင်ငံကို လေကြောင်းကနေ သွားတာဆိုတော့ အဲဒီနေ့မှာ ဒိုင်ယာရီ စရေးဖြစ်တယ်။ အခုတင်ပြမှာ ဒိုင်ယာရီထဲမှာ ရေးမှတ်ထားတဲ့ဟာ တွေနော်။ ၉ ရက်၊ ဩဂုတ်လ၊ ၂၀၀၉ မှာ မနက် ၅ နာရီလောက် မြို့ထဲအိမ်ကနေ လေဆိပ်ကို တက္ကစီနဲ့ သွားတယ်။ စီးတဲ့လေယာဉ်က TG 306၊ လေယာဉ်ထွက်တဲ့အချိန်က ၇ နာရီ ၅၀ ဆိုပေမယ့် ၈ နာရီမှ ထွက်ဖြစ်တယ်။ ၁၀ မိနစ်နောက်ကျတယ်။ လေဆိပ်မှာ အိတ်တွေကီလိုချိန်တော့ ၃၄ Kg ရှိတယ်။ အားလုံး Ok ပဲ။ လေယာဉ်ပေါ်မှာ ဆွစ်ဇာလန်အမျိုးသားနဲ့ လက်ထပ်ထားတဲ့ မန္တလေးမြို့က မြန်မာအမျိုးသမီး တစ်ယောက်နဲ့ မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်။ နောက် မန္တလေးကပဲ ဆစ်အမျိုးသားတစ်ဦးနဲ့ မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်။ ဘန်ကောက်ကို ၉ နာရီ ၃၀ မှာ ရောက်တယ်။ နောက် ဘန်ကောက်ကနေ လန်ဒန်ကို လေယာဉ်ပြောင်းစီးတယ်။ စီးတဲ့လေယာဉ်က TG 910၊ စုစုပေါင်း ၁၂ နာရီ ၅၀ မိနစ်ကြာကြာ စီးရတယ်။ ၁၀ ရက်၊ ဩဂုတ်လ၊ ၂၀၀၉ အင်္ဂလန်စံတော်ချိန် မနက် ၇ နာရီ သာသာမှာ လန်ဒန်က ဟိသရိုးလေဆိပ်ကို ရောက်တယ်။ ဥရောပမြေကို ပထမဆုံး နင်းခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်တယ်။ အဲဒီမှာ အမေရိကန်သွားမယ့် လေယာဉ်စောင့်ရင်း လေဆိပ်မှာ အသားညှပ်ပေါင်မုန့်နဲ့ နွားနို့ ဝယ်သောက်ဖြစ်တယ်။ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇ ကျသင့်တယ်။ အင်္ဂလန်ကနေ Duke University နဲ့ အနီးဆုံးတည်ရှိတဲ့ မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်က RDU လေဆိပ်ကို တိုက်ရိုက်ပျံသန်းတယ်။ ၁၀ ရက်၊ ဩဂုတ်လ၊ ၂၀၀၉ အမေရိကန်စံတော်ချိန် ၃ နာရီ ဝန်းကျင်မှာ RDU ကို ရောက်တယ်။ အမေရိကန်မြေကို ပထမဆုံး နင်းခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ RDU လေဆိပ်အထွက်မှာ အိတ်ထဲမှာ အစားအစာတွေပါလို့ ဆိုပြီး တားထားတယ်။ ရှေ့ အိန္ဒိယစုံတွဲ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် အစစ်ခံရတယ်။ ကိုယ့်အလှည့်စောင့်တယ်။ အလှည့်ရောက်တော့ ဘာမှကို မစစ်တော့ဘဲ လွတ်ပေးလိုက်တယ်။ လေဆိပ်မှာ အမေရိကန်မှာ ကျောင်းတက်စဉ်ကိုယ့်ရဲ့ Host Family အဖြစ် တာဝန်ယူမယ့် B.C. Dash ဆိုတဲ့ အိန္ဒိယနွယ်ဖွား အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ဦး လာကြိုတယ်။ လေဆိပ်ကနေ BC ရဲ့ ကားနဲ့ ကျောင်းရှိရာ Durham မြို့က သူတို့ နေအိမ်ကိုသွားတယ်။ ညနေ ၆ နာရီလောက်မှာ ရောက်တယ်။ B.C. အိမ်မှာပဲ အိန္ဒိယ ညစာစားတယ်။ အမေရိကားရဲ့ ပထမဆုံး ညစာဆိုပါစို့။ ည ၉ နာရီမှာ အိပ်ယာဝင်တယ်။ ရိုထရီပညာသင်ဆုရှင် မြန်မာတစ်ဦးရဲ့ အမေရိကန် ပထမဆုံး ညဆိုပါစို့။
ဒီဆောင်းပါးက ဒိုင်ယာရီဆောင်းပါး မဟုတ်ဘူး။ သို့သော် ရိုထရီပညာသင်ဆုအကြောင်း ရေးသားရင်း ကိုယ်တွေ့ အခြေအနေလေးတွေကို အမြည်းပေးတာနော်။ နောက် Host Family အိမ်ကနေ ကျောင်းနားကနေမယ့် အိမ်ကိုရွှေ့၊ ကျောင်းတက်၊ ပထမနှစ်ပြီး၊ အခြားပြည်နယ်တစ်ခုမှာ အလုပ်သင် ၃ လ လုပ်၊ နောက် ကျောင်းပြန်လာ၊ ဒုတိယနှစ်ဆက်တက်၊ ကျောင်းပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံပြန်လာတယ်ပေါ့။ မြန်မာနိုင်ငံ တန်းမပြန်ဘဲ မလေးရှား ဝင်လည်ခဲ့သေးတယ်။ အမေရိကန်မှာနေခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံးနေ့က ၁၈ ရက်၊ မေလ၊ ၂၀၁၁ ဆိုတော့ မှန်းစမ်း၊ ၁၇ ရက်၊ မေလ၊ ၂၀၁၁ မှာ ဘာတွေများ လုပ်ခဲ့ပါလိမ့်။ နောက်နေ့ အမေရိကန်က အပြီးပြန်တော့မှာဆိုတော့ Duke-UNC Peace Center ရဲ့ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Susan Carroll ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးကို နှုတ်ဆက်တယ်။ B.C. နဲ့ သူ့ အမျိုးသမီး Asha Dash တို့ကို နှုတ်ဆက်တယ်။ ညနေမှာ ဘရာဇီးနိုင်ငံက အခြားရိုထရီ ပညာသင်ဆုရ ကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Eduardo da Costa က ဖိတ်လို့ သူ့အိမ်မှာ အခြားရိုထရီဆုရ ဘရာဇီး ကျောင်းသူတစ်ယောက်၊ သူ့ အမျိုးသမီး၊ သမီးဖြစ်သူတို့နဲ့ ၅ ယောက်သား ဘရာဇီး ညစာစားဖြစ်တယ်။ အမေရိကားရဲ့ နောက်ဆုံးညစာဆိုပါစို့။ ည ၉ နာရီ အိမ်ပြန်ရောက်၊ နောက်ဆုံးလက်ကျန် ပစ္စည်းအချို့နဲ့ မွေ့ရာကို အိမ်နားက အမှိုက်ပုံမှာ သွားပစ်တယ်။ ည ၁၂ နာရီ မိနစ် ၃၀ မှာမှ အိပ်ရာ ဝင်ဖြစ်တယ်။ ရိုထရီ ပညာသင်ဆုရှင် မြန်မာတစ်ဦးရဲ့ အမေရိကန် နောက်ဆုံးညဆိုပါစို့။ ကဲ ... ၁၈ ရက်၊ မေလ၊ ၂၀၁၁ အမေရိကန်မှာ နေခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံးရက်ကို ရောက်ပြီ။ မနက် ၂ နာရီ မိနစ် ၃၀ မှ ထဖြစ်တယ်။ ကြိုမှာထားတဲ့ တက္ကစီက မနက် ၄ နာရီမှာ လာခေါ်တယ်။ မနက်ဆိုတော့ ကားရှင်းတယ်။ RDU လေဆိပ်ကို မနက် ၄ နာရီ မိနစ် ၃၀ မှာ ရောက်တယ်။ မနက် ၇ နာရီမှာ RDU ကနေ နယူးယောက်မြို့က JFK လေဆိပ်ကို ထွက်တယ်။ JFK ၄ နာရီသာသာလောက် UAE နိုင်ငံ၊ ဒူဘိုင်း (Dubai) ကို သွားမယ့် လေယာဉ်စောင့်၊ နောက် ဒူဘိုင်းလေဆိပ်ကို နောက်တစ်နေ့ မနက် ၇ နာရီမှာ ရောက်တယ်။ အဲဒီ ဒူဘိုင်းလေဆိပ်မှာ နောက်ထပ် ၄ နာရီလောက် မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ကွာလာလမ်ပူကို သွားမယ့် လေယာဉ် ထပ်စောင့်ရတယ်။ ကွာလာလမ်ပူကို ၁၉ ရက် မေလ ၂၀၁၁ ဒေသစံတော်ချိန် ည ၉ နာရီ မိနစ် ၃၀ မှာ ရောက်တယ်။ ကွာလာလမ်ပူမှာနေတဲ့ သူငယ်ချင်းနဲ့တွေ့၊ ညစာစား၊ ညသန်းခါင်ကျော် နောက်တစ်နေ့ နံနက် ၂ နာရီမှ ရေချိုး၊ အိပ်ရာဝင်ဖြစ်တယ်။ နောက်နေ့မှာ သူငယ်ချင်းအိမ်ကနေ Cottage Inn ကို ရွှေ့၊ မလေးရှားလာရင်း ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်က ခင်မင်သိကျွမ်းတဲ့ ကွာလာလမ်ပူမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ မြန်မာမိန်းခလေးတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့၊ ဘယ်မှာ တွေ့သလဲ၊ ဘယ်လိုတွေ့သလဲ၊ ဘာကြောင့် တွေ့သလဲ၊ ဘယ်လောက်အထိ ဖြစ်ခဲ့သလဲ ဆိုတာတော့ မမေးနဲ့။ ဆင်ဆာလို့ပဲ ထားလို့ပါ။ ခုတော့ သူလည်း အမေရိကားမှာ အခြေချလို့ အိမ်ထောင်ပဲ ကျသွားပါပြီ။ နောက် ကွာလာလမ်ပူကနေ ရန်ကုန်ကို ၂၆ ရက်၊ မေလ၊ ၂၀၁၁ မှာ အပြီး ပြန်လည်ရောက်ရှိကြောင်းပါ။
ကဲ ... ပညာသင်ဆု အကြောင်း ပြန်ဆက်မယ်။ အများကြီး မပြောဘူး။ ဒီပညာသင်ဆုက တစ်ကမ္ဘာလုံးက ကျောင်းသားတွေ လျှောက်ထားဖို့ အကျူံးဝင်လို့ ယှဉ်ပြိုင်ရတာတော့ တင်းကျပ်တယ်။ ကနေဒါ၊ ဩစတြေးလျ၊ ဗြိတိန်လို အင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်ငံက ကျောင်းသားတွေကအစ ဝင်လျှောက်ကြတဲ့ ပညာသင်ဆုဖြစ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ အာရှတိုက်လို ဒေသမျိုးက ကျောင်းသားတွေလျောက်ရင် သူများတွေထက် ကြိုတင်ပြင်ဆင် အားထုတ်ဖို့တော့ လိုတယ်။ မဟာဘွဲ့အတွက် လုပ်သက် ၃ နှစ် အနည်းဆုံး ရှိရမယ်။ အင်္ဂလိပ်စာ ရမှတ် အနည်းဆုံး ၉၀ (IBT)၊ ၅၇၀ (PBT)၊ ၇.ဝ (IELTS) ရှိထားရမယ်။ TOEFL ရော IELTS လက်ခံပါတယ်။
ပညာသင်ဆု ရရှိသူတွေဟာ Rotary Peace Center တွေ တည်ရှိတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံက Duke University & University of North Carolina at Chapel Hill (သို့မဟုတ်) ဂျပန်နိုင်ငံက International Christian University (သို့မဟုတ်) ဗြိတိန်နိုင်ငံက University of Bradford (သို့မဟုတ်) ဩစတြေးလျနိုင်ငံက University of Queensland (သို့မဟုတ်) ဆွီဒင်နိုင်ငံက Uppsala University တို့မှာ ၁၅ လမှ ၂၄ လကြာ ပညာသင်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လျှောက်လွှာမှာ စာလုံးရေ ၅၀၀ ထက်မပိုတဲ့ အက်ဆေးတို ၅ ပုဒ်လည်း ရေးသားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အက်ဆေးမေးခွန်းများဟာ ရိုထရီရဲ့ ရည်မှန်းချက်များဖြစ်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ သဘောတရားများနဲ့ ဆက်စပ်ပါတယ်။ သတိပြုရမှာ တစ်ချက်က အက်ဆေးရေးရာမှာ ရိုထရီရဲ့ ဆောင်ပုဒ်၊ ရည်ရွယ်ချက်၊ သမိုင်းကြောင်း စတာတွေနဲ့ ချိတ်ဆက် ရေးသားနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ့်လုပ်ဆောင်ချက်တွေထဲမှာ ဘယ်လိုသော လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ ရိုထရီရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွှယ်မှုရှိတယ်ဆိုတာ ကျိုးကြောင်းပြဆက်စပ်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။
အက်ဆေးထဲက တစ်ပုဒ်က ရိုထရီရဲ့ ဆောင်ပုဒ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ “service above self” ဆိုတာကို ကိုယ်လုပ်ဆောင်ခဲ့တာနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြခိုင်းတာမျိုးပါ။ “service above self” ဆိုတာ ကိုယ်ကျိုးမဖက်တာပေါ့။ လုပ်အားပေးတာပေါ့။ ကိုယ့်အတွက် မဟုတ်ပဲ အများအတွက် လုပ်ဆောင်တာပေါ့။ အများအတွက် အစေခံဖြစ်ခြင်းလို့ ဘာသာပြန်နိုင်ပါတယ်။ လူဆိုတာ ဘဝမှာ အများအတွက် တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုတော့ လုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးတာမျိုးပါ။ ဘာတွေ လျှောက်စဉ်းစားနေတာလဲ။ အစိုးရဝန်ထမ်းလုပ်တာ အများအတွက် လုပ်ဆောင်ခဲ့တာပေါ့။ NGO မှာ အလုပ်လုပ်တာ အများအတွက် လုပ်ဆောင်ခဲ့တာပေါ့။ ကျောင်းသားဘဝ အသင်းအပင်း အဖွဲ့အစည်းမှာ လုပ်ဆောင်ခဲ့တာ အများအတွက် လုပ်ဆောင်ဖူးတာပေါ့။ လုပ်အား ပေးဖူးတာ အများအတွက် လုပ်ဆောင်ဖူးတာပေါ့။ လိုအပ်သူတွေဆီ သွားရောက်ကြည့်ရှုတာ၊ အလှူအတန်းပြုတာ အများအတွက် လုပ်ဆောင်ဖူးတာပေါ့။ အောင်အောင် IR တစ်ခါတလေ အပေါင်းအသင်းတွေစုပြီး အနာကြီးရောဂါသည်တွေ၊ ဘိုးဘွားတွေ၊ မိဘမဲ့ ခလေးသူငယ်တွေ၊ စိတ်ကျန်းမာရေး မကောင်းသူတွေဆီ သွားတယ်နော်။ အဲဒါ “Service Above Self” တစ်မျိုးပဲပေါ့။ ဒီခရီးစဉ်တွေမှာ လိုက်ပါသူ အားလုံးဟာ “Service Above Self”ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်သွားပြီ။ “Service Above Self”ဆိုတာ ဘာလဲ ခဏခဏ မေးကြလို့ပါ။ အဲဒီလောက်ဆို ရပြီနော်။
နောက်ပြီး ထောက်ခံစာ ၂ စောင် တင်ပြနိုင်ရပါမယ်။ ဒီမှာ အရေးကြီးတာ Rotary District တစ်ခုခုက ကိုယ့်လျှောက်လွှာကို ထောက်ခံပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ရိုထရီမှာ အဖွဲ့ဝင် ၁.၂ သန်းကျော် ပါဝင်တဲ့ ကမ္ဘာတလွှား Rotary District ၅၃၀ ကျော်နဲ့ Rotary Club ပေါင်း ၃၄,ဝ၀၀ ကျော် ရှိပါတယ်။ Rotary District ဆိုတာ Rotary Club တွေ စုပေါင်းပါဝင်တဲ့ အစုအဝေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Rotary District ဆိုရာမှာ ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး တစ်ခုချင်းက Rotary Club တွေ စုဖွဲ့ထားတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ နိုင်ငံတစ်ခုက Rotary Club တွေ စုဖွဲ့ထားတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံအချို့က Rotary Club တွေ စုရုံးဖွဲ့စည်းထားတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Rotary District ရှာဖွေဖို့ အခက်အခဲ ရှိသူတွေဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ Rotary Club ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း District Contact Finder Tool (https://my.rotary.org/en/search/club-finder) မှာ သွားရောက် ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ အဆင်မပြေဘူးဆိုရင် rotarypeacecenters @rotary.org ကိုလည်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် ကိုယ့်ဘက်က အရင်ဆုံး ကြိုးစားအားထုတ်ရှာဖွေပြီး အဆင်မပြေမှသာ ဘယ်လိုရှာဖွေရ အဆင်မပြေကြောင်း အီးမေးလ်က တစ်ဆင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းသင့်ပါတယ်။ ဒီပညာသင်ဆုဟာ အပြည့်အဝ ပညာသင်ဆုဖြစ်ပြီး နာမည်ကျော်တက္ကသိုလ်ကြီး များမှာ သွားရောက်ပညာ သင်ကြားရမှာဖြစ်လို့ ကိုယ့်ဘက်က အသေအချာ ပြင်ဆင်ပြီးမှသာ လျှောက်လွှာတင်ကြဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။
ရိုထရီရဲ့ လမ်းညွှန်တစ်ခုမှာတော့ ရိုထရီ မဟာဘွဲ့ပညာသင်ဆုရရှိသူများဟာ ပျမ်းမျှ အသက် ၃၀ နှစ်ဝန်းကျင်ရှိကြပြီး လုပ်သက် ၇ နှစ်နီးပါး ရှိကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူတို့ရတဲ့ ပျမ်းမျှ အင်္ဂလိပ်စာ ရမှတ်က TOEFL IBT ၁၀၅ နဲ့ IELTS ၇.ဝ လို့ သိရပါတယ်။ ပညာသင်ဆုလျောက်ထားရရှိသူ အများစုက ၅၀ % နီးပါးက NGO တွေမှာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသူတွေဖြစ်ပြီး အစိုးရအဖွဲ့အစည်းမှာ လုပ်ကိုင်သူ၊ လုပ်ကိုင်ခဲ့သူ ၈ % ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ လုပ်ကိုင်သူ ၁၆ % နဲ့ အခြားကဏ္ဍတွေမှာ လုပ်ကိုင်သူ ၂၂ % ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ခြုံပြီးဆိုရရင် ရိုထရီရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အခြေခံအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ၆ ချက် ဖြစ်တဲ့ Jh Promoting peace, Fighting disease, Providing clean water, sanitation, and hygiene, Saving mothers and children, Supporting education eJY Growing local economies စတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့ ဘာသာရပ်အားလုံး လျှောက်ထားဖို့ အကျုံးဝင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခု သတိပြုရမှာက ပညာသင်ဆုအဖွဲ့အစည်းက ကိုယ့်ကို ရွေးချယ်ပြီးမှ ကျောင်းကို ဝင်ခွင့်လျောက်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လျောက်လွှာပိတ်ရက်က ၃၁ ရက်၊ မေလ၊ ၂၀၁၉ ဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ ... စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို https://www.rotary.org/en မှာ သွားရောက် ရှာဖွေဖတ်ရှုကြပါ။ ကံကောင်းကြပါစေ။